Thu, Jul 2, 2020 at 10:39pm
चीनलाई कुनै शक्तिले हल्लाउन सक्दैन : शी चिनफिङ
मंगलवार, असोज १४, २०७६ साल
काठमाडौं १४ असोज । चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङले चीनलाई कसैले पनि हल्लाउन नसक्ने बताएका छन् । चीनले कम्युनिस्ट शासन शुरू भएको ७०औं वर्षगाँठ मंगलवार मनाएको छ । परेडलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति शी चिनफिङले कुनै पनि तागतले यस महान् राष्ट्रको आधार हल्लाउन नसक्ने बताएका हुन् । बेइजिङमा भव्य सैन्य परेड गरेर चीनले आफ्नो अत्याधुनिक प्रविधि संसारलाई देखाएको छ । चीनको पुरानो र नयाँ नेतृत्वले तियानानमेन स्क्वेयरमा १५..
काबुल, १३ असोज अफगानिस्तानका प्रमुख कार्यकारी तथा राष्ट्रपति असरफ घानीका प्रमुख प्रतिस्पर्धी अब्दुल्लाह अब्दुलाहबीच प्रतिस्पर्धा रहने मानिएको गत हप्ता सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदानबाट आफ्नो विजय भएको नेता अब्दुल्लाहले सोमबार बताउनुभएको छ । अब्दुल्लाहको उक्त दावी मतगणना जारी रहेका समय आएको हो । यद्यपि अफगानिस्तानको निर्वाचन आयोगले भने यसबारे औपचारिक नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । “हामीले निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गरेका..
राष्ट्रिय दिवसको पूर्वसन्ध्यामा चीनले बाँड्यो ६ लाख टेलिभिजन
बेइजिङ, १३ असाेज । चीनले मंगलवार राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा गर्न लागेको सैन्य परेड जनताले हेरून् भनी ६ लाख २० हजारभन्दा बढी टेलिभिजनहरू बाँडेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले मंगलवार शासनसत्ता सम्हालेको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा संसारको अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र, ड्रोन तथा अन्य हतियार देखाउँदैछ । सबैले त्यो परेड हेरून् भनेर चिनियाँ अधिकारीहरूले ३२ इन्चको एलसीडी टीभी बाँडेका छन् । उक्त टीभी चीनमै बनेको हो..
२०० जना यात्रु सवार इन्डिगोको गोवा–दिल्ली उडानमा समस्या, धन्न दुर्घटना टर्यो
पणजी, गोवा, १३ असोज । भारतको गोवाबाट नयाँदिल्लीतर्फ उडेको इन्डिगो विमानको इन्जिनमा समस्या आएपछि गोवा विमानस्थलमै आपतकालीन अवतरण गरिएको छ । विमानमा करिब २०० जना यात्रु सवार थिए । इन्डिगोको ६ई–३३६ विमान गोवाबाट उड्नासाथ पाइलटले इन्जिनमा समस्या आएको पत्ता लगाएका थिए । पाइलटले तत्कालै उक्त जहाज गोवाकै डाबोलिम विमानस्थलमा फर्काएर आकस्मिक रुपमा सकुसल अवतरण गराएका थिए । इन्डिगोका तर्फबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा पाइलटले..
क–कस्ले सुन्छ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको फोन कल ?
काठमाडौँ, १३ असोज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको फोन कलसँग सम्बन्धित जानकारीलाई असामान्य ढंगबाट गोप्य राखेको भन्दै अमेरिकामा एक विह्सलब्लोअरले आरोप लगाएका छन् । यसपछि अमेरिकामा यो चर्चा हुन लागेको छ कि राष्ट्रपतिकोतर्फबाट कुनै अन्य देशको नेतालाई गर्ने फोन कललाई कसरी अनुगमन गरिन्छ र कुराकानीको विवरणलाई कसरी र किन लुकाइन्छ । व्ह्विसलब्लोअर एक अमेरिकी जासुसी अधिकारी हुन् । उनका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प र युक्रेनका..
आईतवार, असोज १२, २०७६ साल
मनिला, १२ असोज । दक्षिणी फिलिपिन्सको डाभाओ अक्सिडेन्टल प्रान्तमा आइतबार ६.४ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । यो भूकम्पको धक्का छिमेकी इन्डोनेसियाको उत्तरी सुलावेशी प्रान्तमा समेत अनुभव गरिएको थियो । इन्डोनेसियाको भूगर्भ केन्द्रले समुद्रमा सुनामीको खतरा नरहेको जनाएको छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाको सीमावर्ती क्षेत्रमा गएको उक्त भूकम्प शुरुमा ६.७ म्याग्नीच्यूडको मापन गरिएको थियो । इन्डोनेसिया भूकम्पीय जोखिममा रहेको मुलुक हो । गत..
कडा सुरक्षा र आक्रमणबीच अफगानी राष्ट्रपतिका लागि भएको मतदान सम्पन्न
काबुल, ११ असोज अफगानिस्तानमा कडा सुरक्षा र बम आक्रमणका घटनाबीच शनिवार भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मतदान केन्द्रलाई निशाना बनाउने बताएका तालिबान लडाकुको चेतावनीबीच देशभरि ७० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । तालिवान विद्रोहीले मतदान केन्द्रहरूसमेतमा बम र मोर्टार आक्रमण गरी निर्वाचन मतदानलाई भाँड्ने प्रयास गरेका थिए । नब्बे लाखभन्दा बढी मतदातामध्ये यहाँ ३५ प्रतिशत महिला मतदाता रहेका छन् । स्वतन्त्र निर्वाचन..
भारतमा बाढीका कारण ४४ जनाको मृत्यु
नयाँ दिल्ली, ११ असाेज । भारतमा आएको पछिल्लो बाढीका कारण कम्तीमा ४४ जनाको मृत्यु भएको छ ।अधिकारीका अनुसार बाढीबाट प्रभावित भएका हजारौँ विस्थापित भएका छन् । देशको उत्तर प्रदेश राज्यमा अत्यधिक वर्षाका कारण बाढी आएको हो । गत २४ देखि ४८ घण्टासम्मको अवधिमा अत्यधिक वर्षा भएको र नदी किनारका क्षेत्रमा बढी असर गरेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । “गएरातिसम्ममा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४४ पुगेको..
इमरानले लगाएको आरोपको जवाफ यसरी फर्कायाे भारतले
नयाँ दिल्ली, ११ असाेज । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा दिएको अभिव्यक्तिको भारतले जवाफ फर्काएको छ। प्रधानमन्त्री खानले भारतले शान्तिका लागि गरिएका सबै प्रयासहरु विफल बनाएकोलगायतका आरोप लगाएका थिए। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यपछि भारतले महासभामा राइट टू रिप्लाईको अधिकार प्रयोग गरी खानको अभिव्यक्तिलाई भड्काउ र झूठो रहेको आरोप लगाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयकी प्रथम सचिव विदिशा मैत्राले पाकिस्तानले आफ्नो..
साउदी अरब पहिलो पटक पर्यटकका लागि पनि खुल्ला
रियाद, १० असोज साउदी अरबले पहिलो पटक पर्यटकहरुलाई पनि प्रवेशाज्ञा दिने निर्णय गरेको छ । अति रुढीवादी मुस्लीम मुलुक साउदी अरबले शुक्रबार पर्यटकहरुलाई पनि स्वदेशमा स्वागत गर्ने घोषणा गरेको हो । तेलको व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको यस मुलुकमा अवदेखि पर्यटनलाई पनि अर्थतन्त्रको अर्को पाटोको रुपमा विकास गर्न लागिएको बताइएको छ । घुम्नका लागि विदेशी नागरिकहरुलाई खुल्ला गरिएपनि केही सर्त भने कडा बनाइएको छ ।..
टोकियो, १० असाेज । जापानले आफूलाई कोरियाभन्दा चीनकाे डर बढी भएकाे बताएकाे छ । टोकियोले वार्षिक रक्षा प्रतिवेदन समीक्षा सार्वजनिक गर्दै उत्तर कोरियासँग परमाणु ब्यालेस्टिक मिसाइल भए पनि मुख्य डर उत्तर कोरियाभन्दा पनि चीनबाट बढी रहेको जनाएको हाे । उक्त सुरक्षा विश्लेषण अनुसार जापानको सहयोगी मुलुक अमेरिकापछि चीन दोस्रो स्थानमा आएको हो भने उत्तर कोरिया तेस्रो स्थानमा छ । शीत युद्धका समयमा जापानलाई मुख्य डर..
साउदी युवराजले लिए पत्रकार खाशोज्जी हत्याको जिम्मेवारी
काठमाडाैं, १० असाेज । साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानले पत्रकार जमाल खाशोज्जीको हत्याको जिम्मेवारी लिएका छन्। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार युवराज सलमानले गतवर्ष भएको खाशोज्जी हत्याको जिम्मेवारी लिएका हुन्। उनले आफ्नै उपस्थितिमा नै हत्या गरिएको स्वीकार गरेका हुन्। युवराज सलमानले अर्को हप्ता प्रशारण हुने पिबिएसको एक डकुमेन्ट्री छायांकनका क्रममा उक्त कुरा बताएका हुन्। सलमानले पहिलोपटक पत्रकार खाशोज्जीको हत्याको जिम्मेवारी लिएका हुन्।..
भूकम्पका कारण इन्डोनेसियामा २० को मृत्यु, सय घाइते
बिहिवार, असोज ९, २०७६ साल
आम्बोन सिटी, इन्डोनेसिया, ९ असोज इन्डोनेसियामा बिहीबार आएको भूकम्पमा परी कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार सो भूकम्पका कारण अरु दर्जनौ घाइते भएका छन् भने सयौँ विस्थापित भएका छन् । देशको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने मालुकु टापुमा गएको भूकम्पपछि आएको पहिरोमा परी एक जना पुरिएका छन् । भुकम्पबाट त्रसित भएका स्थानीय बासिन्दा दौडिएर घरबाट बाहिर निस्किएका थिए । उनीहरु..
ह्वाइट हाउसले सार्वजनिक गर्‍यो डोनाल्ड ट्रम्पको फोन वार्ता
वाशिङटन, ९ असाेज । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनका राष्ट्रपति ब्लोदीमीर जेलेन्स्कीबीच भएको फोन वार्ताको विस्तृत विवरण बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । सोही विषयलाई लिएर अहिले राष्ट्रपतिविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रक्रिया चलिरहेको छ । ह्वाइट हाउसले सार्वजनिक गरेको वार्ताको विवरणमा ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई २५ जुलाईका दिन फोन गरेका थिए । उनले विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका सम्भावित राष्ट्रपति पदका उमेदवार..
ट्रम्पमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया शुरू भएकाे सभामुखकाे घाेषणा
वासिङ्टन, ९ असाेज । अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुखले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाउन औपचारिक अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु भएको घोषणा गरेकी छन् । डेमोक्रेट पार्टीकी नेतृसमेत रहेकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले राष्ट्रपतिमाथि ‘विदेशी शक्तिलाई अमेरिकी चुनावमा हस्तक्षेप गर्न निम्ता दिएर संविधान उल्लंघन गरेको’ आरोप लगाएकी छन् । डेमोक्रेटिक पार्टीबाट आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने दौडमा अग्रस्थानमा रहेका जो बिडेन र उनका..
इजिप्टमा राष्ट्रपतिको विरुद्दमा उत्रिएका एक हजार प्रदर्शनकारी प्रक्राउ
कायरो, ८ असोज इजिप्टमा भएको प्रदर्शनबाट एक हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई अधिकारीहरूले पक्राउ गरेका छन् । अधिकारवादी दुई समूहले दिएको जानकारी अनुसार राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसिको बहिर्गमनको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । दुवै संस्थाले पक्राउ परेकाहरूको एकिन तथ्याङ्क भने फरक फरक दिएका छन् । इजिप्टीयन सेन्टर फर फ्रिडमस् एण्ड राइट्सले एक हजार तीन जना पक्राउ परेको जनाएको छ भने इजिप्टीयन..
बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनले विपक्षीसँग निर्वाचनबारे कुराकानी गर्ने
संयुक्त राष्ट्रसंघ, ७ असोज बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा अदालतको निर्णयपछि प्रतिपक्षी दललाई निर्वाचनका लागि समर्थन गर्न पुनः आग्रह गर्ने हुनुभएको छ। बेलायतको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री जोनसनको संसद निलम्वन गर्ने निर्णय गैरकानूनी भएको ठहर मङ्गलबार नै गरेको छ । जेरमी कोर्बिनले आफ्नो पछिबाट निर्वाचनको आह्वान गर्नु अबको स्पष्ट विकल्प भएको बताउनुभएको उल्लेख जोनसनले न्यूयोर्कमा सञ्चारकर्मीसँग गर्नुभयो । ..
इरानी राष्ट्रपतिसँगको भेटघाट टुङ्गो लागेको छैन– ट्रम्प
संयुक्तराष्ट्र संघ, ७ असोज । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी साता संयुक्तराष्ट्र संघ महासभाको बैठकका क्रममा इरानी राष्ट्रपतिसँग भेटघाट हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । तर उहाँले भेटघाटको औपचारिक कार्यक्रम अझैसम्म तय भइनसकेको जानकारी दिनुभयो । संयुक्तराष्ट्र महासभाको बैठकस्थल न्यूयोर्कमा दुबै नेताबीच भेटवार्ता हुने सम्भावनाका बारेमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याँक्रोले दुबै नेताबीच वार्ता गराउन प्रयास जारी..
टोकियो, ६ असोज जापानमा सोमबार आएको तपाह नाम दिइएको आँधीका कारण कम्तीमा ५० जना घाइते भएको अधिकारीहरुले सोमबार जनाएका छन् । जापानको मौसम विभागले दिएको जानकारी अनुसार देशको दक्षिणी तथा दक्षिणपश्चिमी क्षेत्रमा आँधी आएको थियो । सामुद्रिक क्षेत्रबाट आएको अहिलेको आँधी यो सिजनको १७औँ आँधी भएको अग्नि तथा प्रकोप व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । देशको ओकिनावा, सागा, नागासाकी र मियाजाकीलगायतका क्षेत्रमा शक्तिशाली हावासहितको आँधी..
लण्डन, ६ असाेज । बेलायतको निकै पुरानो टुर कम्पनी थोमस कुकले अतिरिक्त रकम जुटाउन नसकेपछि टाट पल्टिएको घोषणा गरिएको छ। कम्पनीले विश्वभर गरेका छ लाख यात्रा बुकिङ पनि रद्द गरेको जनाएको छ। बेलायत सरकारले हाल विदेशमा यात्रारत एक लाख ५० हजार बेलायती नागरिकलाई कम्पनीको निर्णयले असर पर्ने बताएको छ। बेलायती नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थोमस कूकले आफ्नो व्यवसाय रोकेको जनाएको छ। यस कम्पनीका चार..
प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति ट्रम्पको 'चुनावी प्रचार' गर्दै भने - अबकी बार ट्रम्प सरकार
एजेन्सी, असोज ६ । अमेरिकाको ह्युस्टनमा आयोजित ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बोलेको कुरामा प्रतिपक्षी भारतीय कँग्रेसले विरोध जनाएको छ । कँग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री आनन्द शर्माले मोदीको कार्यलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी प्रचार संज्ञा दिए । मोदीले अमेरिका दुई प्रमुख दललाई भारतले समान व्यवहार गर्ने गरेको परम्परामा धक्का दिएको शर्माले आरोप लगाएका छन् । कँग्रेसका वरिष्ठ नेताले शृङ्खलाबद्ध..
जेरूसेलम, ५ असोज इजरायलमा राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि गृहकार्य गरिरहेका समय पूर्व रक्षामन्त्री अभिडोर लिबरम्यानले निवर्तमान प्रधानमन्त्री वेन्जामिन नेतन्याहु वा अर्का नेता वेन्नी गान्ज कसैलाई पनि सिफारिस नगर्ने बताउनुभएको छ । गत हप्ता सम्पन्न निर्वाचनमा नेता नेतन्याहुको दलको अनपेक्षित हार भएपछि प्रधानमन्त्रीका लागि गान्जले सक्रियता देखाउनुभएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीका लागि नेतन्याहुको दलले पनि दावी गरेको छ । लिवरम्यानको राष्ट्रवादी पार्टी यिजरायल..
वासिङ्टन, ५ असोज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिने सिलसिलामा न्यूयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भएदेखि नै सुल्झन बाँकी रहेका अनगिन्ती विदेश नीतिहरुको सूची राष्ट्रपति ट्रम्पसँग अझै छन् । इरान, उत्तर कोरिया, अफगानी तालिबान, इजरायल र प्यालेस्टाइनका मुद्दाहरु ज्युँकात्युँ छन् । व्यापार सम्झौताका कतिपय विषयहरु टेबलमा अलपत्र छन् । केही व्यापार सम्झौता होलान् कि भन्ने देखिए पनि कतिपय..
खाडी क्षेत्रको सुरक्षा आफैँ गर्ने इरानको घोषणा, सैनिक बढाउने अमेरिकाको निर्णय
तेहरान, ५ असोज । इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले रणनीतिक महत्वको पर्सियाली जलक्षेत्रको सुरक्षामा इरानले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने आइतबार बताउनुभएको छ । तेहरानमा आयोजित सैनिक परेड कार्यक्रममा उहाँले पर्सियाली जलक्षेत्रमा अमेरिकी सैनिक प्रभाव बढ्दै गएकामा आलोचना गर्नुभयो । संयुक्तराज्य अमेरिकाले आफ्ना गठबन्धन अरब राष्ट्रहरुको सहयोगका लागि भन्दै खाडी क्षेत्रमा आधुनिक उपकरण सहित थप सैनिक तैनाथ गर्ने घोषणा गरेसँगै इरानको यस्तो प्रतिक्रिया आएको..
उत्तर अमेरिकामा यसकारण घटे ३ अर्ब चरा
काठमाडौँ, ५ असोज । उत्तर अमेरिकामा अमेरिका र क्यानडामा ५० वर्षमा १०.१ अरब चरा थिए । यो संख्या घटेर ७.२ अर्ब भएको कोरोनेल युनिभर्सिटीको एक अध्ययनले उक्त निचोड निकालेको हो । जसअनुसार ५० वर्षमा तीन अर्ब चरा घटेका छन् । साइस जर्नलमा प्रकाशित शोधका अनुसार यदि यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने ठूलो क्षति हुने छ । शोधकर्ताहरुले मौसमको राडारको प्रयोगले चराहरुको संख्याको आँकडा निकालेका..
ज्यान जाेगाउन पाकिस्तानबाट भागेर अमेरिका पुगेकी गुलालाई इस्माइल
इस्लामाबाद, ५ असाेज । ‘राज्य विरोधी गतिविधी’ र ‘हिंसा भड्काएको’ गम्भीर आरोप लागेपछि पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता गुलालाई इस्माइल अमेरीका पुगेकी छिन् । सेनाविरुद्ध आवाज उठाउने इस्माइल महिनौंसम्म लुकेपछि पाकिस्तान छोडेर भागेकी हुन् । इस्माइल पाकिस्तानी सरकारको निशानमा थिइन् तर उनीमाथि लगाएको यात्रा प्रतिबन्धबाट बचेर देश छोडेर भाग्न सफल भएकी छिन् । पाकिस्तानले इस्माइलमाथि ‘राज्य विरोधी गतिविधी’ र ‘हिंसा भड्काएको’ गम्भीर आरोप लगाएको छ । इस्लाइलले आफ्नो ज्यानमाथि खतरा..
जब संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेसले चीनको प्रसंशा गरे ...
बेइजिङ, ४ असोज संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्र संघका कामहरूको अभिन्न अङ्ग बन्दै आएकोमा चीनको प्रसंशा गर्नुभएको छ । चीनले बहुपक्षीयतावादको खम्बा रहेर विश्व समुदायबीच मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको सत्तरीऔं वार्षिकोत्सव राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा शुभकामना दिँदै उहाँले पठाएको एक सन्देशमा बताउनुभएको छ । चीन र संयुक्त राष्ट्र संघले सधैं झैँ हाल पनि विश्वव्यापी विभिन्न समस्याको सामना गर्दै..
जेलेन्स्की र ट्रम्पबीच आगामी हप्ता भेटवार्ता हुने
किभ, ३ असोज यूक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीच आगामी हप्ता न्यूयोर्कमा भेटवार्ता हुनेभएको किभको उच्चस्तरीय एक स्रोतले शुक्रबार जनाएको छ । जेलेन्स्कीले गत मे महिनामा सत्तारोहण गरेपछि दुई नेताबीच हुन लागेको यो पहिलो भेट हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन जेलेन्स्की यही सेप्टेम्बर २३ देखि २६ सम्म अमेरिका जाने कार्यक्रम तय भएको र सोही अवसरमा उहाँहरूबीच भेटवार्ता हुन लागेको जेलेन्स्कीको..
अमेरिकाद्वारा क्युबाका २ कूटनीतिज्ञ देशनिकाला
न्यूयोर्क, ३ असाेज । संयुक्त राज्य अमेरिकाले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि दुई कूटनीतिज्ञलाई देशनिकाला गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताका अनुसार उनीहरूमाथि 'अमेरिकाको राष्ट्रिय हितलाई हानि पुग्ने गतिविधिमा संलग्न' रहेको आरोप छ। अमेरिकाले अन्य क्युबाली कूटनीतिज्ञको हिँडडुलमा पनि प्रतिबन्धहरू लगाउँदै राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय रहेको म्यान्ह्याटनभित्रै रहनुपर्ने उल्लेख गरेको मोर्गन ओर्टागुसले बताए। अमेरिकाले क्युबाली कूटनीतिज्ञका आरोपित गतिविधिबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छैन। क्युबाका विदेशमन्त्री ब्रुनो रोड्रिगुएजले..
बेलायतमा प्रतिघण्टा २ सय जनाले चुरोट छोड्न थाले
लण्डन, २ असोज बेलायतमा हरेक घण्टा औसतमा दुई सय जनाले चुरोट त्याग्ने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । यूनिभर्सिटी कलेज लण्डनले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चुरोट त्याग्नेहरुको सङ्ख्या औसतमा बेलायतमा सवैभन्दा धेरै रहेको छ । गत दश बर्षको अवधिमा छिट्टै चुरोट त्याग्नेहरूको संख्यामा बेलायत सवैभन्दा अगाडि देखिएको पब्लिक हेल्थ इङ्ल्याण्ड (पिएचइ)ले जनाएको छ । राष्ट्रिय धुम्रपान अध्ययनको पछिल्लो विवरण अनुसार यही सन् २०१९..
Results 1602: You are at page 14 of 54